Hichapụ akaụntụ PayPal
Ikekwe, onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ Ịntanetị na-eji ọtụtụ ihe onwunwe na ọrụ ntanetị maka ọrụ ndị ọkachamara, ihe omume dị egwu ma ọ bụ ntụrụndụ na-abaghị uru. Ọtụtụ n'ime ha chọrọ ndebanye ndebanye, ntinye data onwe onye na okike nke aka ha, nbanye na ịnweta paswọọdụ. Mana ka oge na-aga, ọnọdụ na mmasị dị iche iche gbanwere, mkpa maka profaịlụ onwe gị na saịtị ọ bụla nwere ike ịla n'iyi.
Anyị na-ewepụ ego n'aka PayPal
Mkpa ịkwụsị ego site na ịkwụ ụgwọ PayPal nwere ike ibili n'ihi ihe dị iche iche. Usoro a dị mfe ma na-ewe obere oge. Gụọ kwa: Ịnyefe ego site na obere akpa PayPal na ụzọ ọzọ 1: Iwepụ ego na akaụntụ ego
Jiri PayPal E-obere akpa
Usoro PayPal dị mfe ma dị mma bụ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị na Intaneti bụ ndị na-arụsi ọrụ ike, na-azụta site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ na-eji ya maka mkpa ha. Onye obula choro iji uzo a eme ihe n'amaghi mgbe niile.
Onye ọ bụla na-eji PayPal e-obere akpa nwere ike mkpa ịnyefe ego na akaụntụ ọzọ. A na-eme usoro a n'otu ụzọ ahụ dịka na usoro ndị ọzọ, mana e nwere ọtụtụ ọnọdụ ụfọdụ a ghaghị ịhụ maka ịrụ ọrụ nke ọma. Anyị na-ebufe ego na akaụntụ PayPal ọzọ Iji nyefee ego na akaụntụ PayPal ọzọ, ịkwesịrị ịnweta akaụntụ kwadoro, nweta ozi mail gị, jikwa ozi email nke onye ịchọrọ izipu ego.
PayPal Ndebanye aha
N'oge enwere ugwo uzo di iche iche nke na eme ka o kwe omume ibufe ego na kaadị, gbanye n 'ulo ntanetiti na otutu ihe. Usoro ndị dị otú ahụ gụnyere PayPal, nke dị mfe ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ na eBay. Ịdenye aha na PayPal Ndebanye aha na ọrụ a dị nnọọ mfe, ma ọ bụrụ na ịmetụbeghị usoro yiri nke ahụ, isiokwu a bara ezigbo uru.
Ọtụtụ mgbe, ọrụ niile a maara (Yandex.Money, Qiwi, WebMoney) mgbe ị debanyere aha nke ọnụọgụgụ pụrụ iche nke ndị mmadụ nwere ike ịhazi usoro. Mana PayPal dị iche. Anyị na-amata nọmba akaụntụ gị na PayPal. N'oge ndebanye aha, a ga-ajụ gị ka ị jupụta n'ọhịa achọrọ maka email, ya onwe ya, n'aka nke ya, ọ bụghị naanị maka ịnweta ozi ederede, iweghachite ohere na ikwenye obere akpa, kamakwa maka ID ịkwụ ụgwọ, karịa ọ bụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Paypal 2020